Arts & Humanities » တမ်းချင်း	13
ခင်ဇော် says: ၁) ရေးထားတာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ရေးဟန်ကို ကြိုက်တယ်။
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ် မမချွိ..
Thint Aye Yeik says: .နာလည်း ဒေါ်ဖွားမေကြီးရဲ့ အပြုံးကို အပြေးအလွှား သွားကြည့်ထားအုန်းမှ
Kaung Kin Pyar says: အန်တီဒေစီ ပုံစံမျိုးနဲ့ နည်းနည်းဆင်တယ် ထင်ပါတယ်…
ဒေါ်ဖွားမေကိုကြည့်ရင်းးး ခင်ဖွေးလေးပါ ကြည့်သွားပါဟယ်…. (ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ ဖွေးဖွေးကို ပြောပါတယ်.. ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ငင့် ရုပ်ဖျက်ထားသလိုပဲအရင်ကကကပြာ အရေးအသားနဲ့ကွာသွားပြီ
Kaung Kin Pyar says: ပိုကောင်းသွားတာလား.. ပိုဆိုးသွားတာလား..ဟင်.. အသက်ကြီးလာလို့..ထင်ပါရဲ့ မမ၀ါးရေ….။ ကိုယ်တိုင်လဲ အရင်ကပိုစ့်အဟောင်းတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း.. အလဲ့.. ငါ အတော်နုခဲ့တာပါလား လို့တောင် တခါတလေ.. တွေးမိတယ်… ဟီးးးး
Wow says: ဂျီးတော်က သူငယ်ပြန်နာဆိုတော့ အရင်လက်ရာကြိုက်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အရင်က အတွေးမျိုးတွေနဲ့ ဝေးသွားတာကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင့်….
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့ ဇာတ်ကောင်လား။ စိတ်ကူးထဲကလားဟင်။ အပြင်မှာ အဲလိုမျိုး တွေ့ဖူးတယ်။ သာမန်ကျူရှင်ဆရာမ ဘ၀ကနေ တိုက် ၄လုံးထဆောက်တဲ့ ဆရာမကို။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိလာတာက သူတို့ဟာ ဟောက်စားတွေဆိုတာပဲ။ ငွေရေးကြေးရေးကို ဒီလောက်ရှေ့တန်းတင်လွန်းတဲ့ ပညာရေးနယ်ပယ်က လူဟာ ခလေးတွေပညာရေး တကယ်အလေးထားပါ့မလား။
Kaung Kin Pyar says: တကယ့် ဇာတ်ကောင်ပါ အမ…။ သက်မွန်မြင့်ယောကျာင်္း ကတုံးဟာ အန်တီစိမ်းရဲ့သား အကြီးကောင်ပေါ့…။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကင်းကောင်ကို စားရမယ်ဆို မြေအိုးစစ်တပ်လို့ ပြောရဲတယ်…
Ko Thet says: Nice ….
kotun winlatt says: ဒေါ်ရင်စိမ်းးးးးး